TOOS: Madaxweyne Gaas oo maanta wareejinaya dhaqaale loogu talo galay dhameystirka garoonka diyaaradaha Garowe iyo wadada Ceerigaabo. | puntlandi.com
TOOS: Madaxweyne Gaas oo maanta wareejinaya dhaqaale loogu talo galay dhameystirka garoonka diyaaradaha Garowe iyo wadada Ceerigaabo.
(Pi Garowe) Munaasabad balaaran oo ku saabsan dhameystirka mashaariicda dhismaha garoonka diyaaradaha Garowe iyo wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo ayaa haatan ka socota xarunta jaamacadda bariga Afrika ee magaalada Garowe.
Madaxweyne dowladda Puntland Gaas oo isugu munaasibadaan soo qaban qaabiyay ayaa wareejinaya lacag dhan $2.5 Million oo lagu dhameystirayo garoonka diyaaradaha ee Garoowe iyo $1Million oo ay dalbadeen guddiga dhismaha wadada Ceel Daahir-Ceergaabo.
Isu gaynta lacagtaan oo ah saddex milyan iyo badh ayaa la sheegay inay qeyb tahay lacag toban milyan ah oo ay dowladda Puntland ka heshay shirkada DP-World, taasoo dhawaan heshiis ku gashay horumarinta dekeda magaalada Bosaso.
Faahfaain intaan ka badan kala soco Puntlandi.